Kuitwa kweSMB server kwave kuchiratidzwa muLinux kernel | Linux Vakapindwa muropa
Kuitwa kweSMB server kwave kuchiratidzwa muLinux kernel
Mazuva mashoma apfuura chikumbiro chakaburitswa yekubatanidzwa mune inotevera vhezheni yeLinux kernel mairi faira kusevha kuitisa uchishandisa iyo SMB3 protocol inokurudzirwa.
Izvo zvinofungidzirwa ndezvekuti server yakagadzirirwa se ksmbd kernel module uye inozadzisa yaimbove iripo SMB kodhi kodhi, kuwedzera pakuona izvo, kusiyana neSMB server inomhanya munzvimbo yemushandisi, kernel level yekushandisa inoshanda zvakanyanya maererano nekuita, ndangariro kushandiswa uye kusangana pamwe neepamberi kernel kugona.
Mhuri yeSMB yemaprotocol ndiyo yakanyanya kuitiswa mu iyo network faira system uye ndiyo yakasarudzika paWindows uye Mac (uye kunyange pane akawanda mafoni uye mahwendefa), nevatengi uye maseva pane makuru anoshanda masisitimu, asi akashaya kernel server yeLinux.
Vanyori vakuru veksmbd kodhi ndiNamjae Jeon anobva kuSamsung naHyunchul Lee kubva kuLG, mukuwedzera kune iyo ksmbd inoperekedzana sechikamu chekernel ichatarisira Steve French kubva kuMicrosoft uye akamboshanda kwemakore mazhinji kuIBM, pamusoro pezve kushanda paCIFS / SMB2 / SMB3 masisitimu ekuchengetedza muLinux kernel uye inhengo yenguva refu yeSamba nhengo zvakare yakaita mupiro wakakosha mukuitwa kweSMB / CIFS Support Protocol paSamba neLinux.
Kune vakawanda kesi, yazvino nzvimbo yemushandisi nzvimbo maseteni anga asina kukwana kungave nekuda kwekurangarira tsoka, kuita, kana kunetseka kubatanidza zvakanaka nezvakanaka zveLinux maficha.
ksmbd iyi kernel module nyowani inoitwa parutivi rwe server yeiyo SMB3 protocol. Chinangwa ndechekupa zvakagadziriswa kuita, kubata zvirinani kubatira (kugovera caching).
Izvo zvinomira pachena nezve ksmbd ndeye yakagadziridzwa rutsigiro yeyakagoverwa faira caching tekinoroji (SMB lease) pane zvemuno masisitimu, ayo anogona kudzikisira zvakanyanya traffic.
Mune ramangwana, zvakarongwa kuwedzera zvitsva, senge rutsigiro rweRDMA ("Smbdirect"), pamwe neprotocol extensions zvine chekuita nekusimudzira simba rekunyorera uye kuongorora uchishandisa masiginecha edhijitari.
Inofanira kuonekwa kuti ekuwedzera akadaro ari nyore kwazvo kuita pane sevha compact uye yakanyatsogadziriswa inomhanya padanho rekernel pane iyo Samba package. Ndataura izvozvo, ksmbd haina kuitirwa kuti ive kutsiva kwakakwana kweSamba, iyo inopfuura zvinopfuura kugona kwefaera server uye inopa maturusi ayo anochengetedza masevhisi, LDAP, uye dhairekita controller.
Samba's faira server yekumisikidza iri muchinjika-chikuva uye yakagadzirirwa kushandiswa kwakapamhama, zvichiita kuti zvive zvakaoma kugadzirisa dzimwe nharaunda dzeLinux, senge firmware yezvishandiso-zviine zvishandiso zvishandiso.
Chinangwa chikuru ndechekuwedzera nyowani inoita nekukurumidza (semuenzaniso RDMA aka "smbdirect" uye ichangoburwa encryption uye siginecha yekuvandudza protocol) izvo zviri nyore kukudziridza pane diki uye yakagadziridzwa kernel server pane, semuenzaniso, pa Samba. Iyo Samba chirongwa chine yakakura kwazvo chiyero (maturusi, mabasa ekuchengetedza, LDAP, Anoshanda Directory dhairekita controller, uye muchinjika-chikuva faira server yezvakasiyana zvakasiyana zvezvinangwa) asi iyo faira server chikamu cheiyo mushandisi nzvimbo Samba yakaratidza kuoma kugadzirisa kune mamwe mabasa eLinux, kusanganisira yezvigadzirwa zvidiki.
Izvo zvinotaurwa kuti Ksmbd haina kutaridzika seyakazvimirira chigadzirwa, asi asi sekuwedzera Yakakwira-kuita, yakadzamidzirwa mudziyo-wakagadzirira Samba chishandiso icho chinobatana pamwe neSamba zvishandiso uye maraibhurari pazvinenge zvichidikanwa. Semuenzaniso, vagadziri veSamba vakatobvumirana kushandisa smbd-inoenderana mafaira ekumisikidza uye akawedzera hunhu (xattrs) mu ksmbd, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchinja kubva smbd kuenda ksmbd uye zvinopesana.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve chikumbiro cheichi chiitiko, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuitwa kweSMB server kwave kuchiratidzwa muLinux kernel
Yekutanga Warp: one-tinya mutambo weLinux
Zvemagetsi software yeLinux yako distro